प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नरुन केपी ओलीको आग्रह – YesKathmandu.com
सोमबार १५, कार्तिक २०७३
‘जहिले रिसाउनी निर जहिले रिसाउनी कहिले होला मायासँग माया विसाउनी’ ……………अगाडि पछाडि सुरक्षा सेनाका साथ देउसी खेल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ पुगेका हुन । देउसी खेल्न घरबेटीको आँगनमा पुगिसकिएको छ । दुवै जनाको सुरक्षाका लागि अगाडि पछाडि सुरक्षा सेना तल्लीन छन् । केहीबेरमै, घरबेटी बा नाङलोमा सेलरोटीका साथ दक्षिणा लिएर आइपुगिसकेका छन् । आषिक प्रदान गर्न भने बाँकी छ ।
कार्यक्रम उद्घोषकले, अध्यक्षद्वय दुवैलाई लाइनमा तयारीकासाथ बसेर देउसी भटट्याउन आग्रह गर्छन् । त्यससँगै,उद्घोषकले माइक राख्छन् । प्रधानमन्त्री एवंम अध्यक्ष प्रचण्ड मुसुमुसु हाँस्दै दक्षिणतिरको लाइनमा बस्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली उत्तरी लाइनमा बस्छन् । कार्यक्रममा देउसी भैंलो हेर्न जाने दर्शक सवैले जोडदारका साथ ताली बजाउँछन् । अनि देउसी भटट्याउने कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।
नेपाली उखानमा लेडिज फस्र्ट छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला तपाई नैं देउसी भटट्याउनुस न अनि म भनौंला भने । आग्रह स्वीकार्दै ओलीले देउसी भटट्याउन थाल्छन् ।
ओली : हे ! मुखर्जी आउलान् आँगनै, खोला नाला माग न ।
भैंसी व्यायो, गाईं थारो,राम्ररी बान्नु थौलो ।
प्रचण्ड :उत्तरतिर फर्केर,दक्षिण तिर झर्केर
दुःख पाइस मङगले, निश्चित रुपमा आफ्नै ढङगले ।
ओली : छानामाथि घिरौंला, कति टिक्छौं हेरौंला ।
हे ! देउवाजीको दया भया, नत्र काशी गया ।
प्रचण्ड : जसले दिन्छ पाथी तीनै मेरा साथी ।
कुकुर भुकिरहन्छ लम्किरहन्छ निश्चित रुपमा हात्ती
ओली :एउटाले अर्कालाई बोक्यो कुर्सिको मिति तोक्यो ।
कुरा बुझिन मैले चुनाव गर्छाै कहिले ?
पतिहरुको देउसी भैलो कार्यक्रम हेर्न पुगेका दुवै पत्नीहरु(सक्कली) पेट मिचिमिचि हाँसिरहेका थिए । दर्शकहरुको पनि हालत उस्तै भयो । उनीहरु पेट मिच्दैं देखिन्थे । अन्त्यमा प्रचण्डले देउसी भटट्याउन नसकेपछि हाँस्दै हुँउ, हुँउ…. भन्दै जवाफ फर्काउछन् । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले नरुन आग्रह गर्दै दुवैजना घरबेटीको आँगनमा ‘झम्के फूली नाँकैमा बुलकी यसपालित घरबारै होलाकी’बोलको गीतमा कम्मर मर्काउदै नाच्छन् । घरबेटी बाले आशिर्वाद दिएसँगै देउसी भैंली टोलीले आफ्नो कार्यक्रम विसर्जन गर्छ ।
आइतबार यस्तै दृश्य फेला पर्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हलमा । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका विभिन्न पार्टीका शिर्ष नेताहरुका अगाडि मञ्चमा सिस्नुपानी नेपालले यस्तै व्यंग्यवाण प्रहार गरिरे । नक्कली पात्र बनि हाँस्य कलाकारद्वय मनोज गजुरेल र सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीलाई घरी पेट मिचिमिचि हसाए त कहिले गम्भीर पनि देखिए ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नूहोसः
आज टीकाको उत्तम साइत ११ः५२
‘बलात्कारीलाई सर्वस्वसहित आजीवन कारावास सजाय देउ’
मन्त्रीको भागबन्डामा एमालेका पाँच नेताबीच होडबाजी
अन्तः मुद्दा लडेरै नागरिकता पाइन सरस्वतीले
आन्दोलन रोकिँदैन, वार्तामा कुनै प्रगती भएनः उपेन्द्र यादव
भूकम्पबारे जानकारी लिन आफै पुगे डा.यादव
आफैं राष्ट्रपति बन्नका लागि लभिङ गर्दिन – खनाल
विप्लवका कार्यकर्ताले फोडे हप्ता नबित्दै उज्जनको शालिक